Hitachi HDD Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Faylal ay ka cajaladaha Hitachi Hard
> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Faylal ay ka cajaladaha Hitachi Hard
A drive Hitachi adag waa qalab aan kacsan lagu kaydiyo xogta digital, oo ay isticmaalaan iyo aad u badan isticmaala computer. Inkastoo, waa arrin la isku halayn karo, khasaaraha xogta ka Hitachi disk adag waa wax kaftan gala. Badan oo dadka isticmaala computer oo ay ku jiraan qaar ka mid ah khubarada had iyo jeer u arkaan in ay xog laga badiyay tan iyo weligeedba "Delete" ama "qaab" amarka soo diray. Dhab ahaantii, waxa ay tahay qalad ah.
Marka aad tirtirto ama xogta qaab on a Hitachi disk adag, qayb ka mid ah ay Hitachi disk adag meesha xogta laga badiyay hore la wareegay waxa lagu calaamadiyaa sida loo heli karo xogta cusub ee, iyo xogta jir noqdo aan la arki karin. Hense, aad xogta jir aan la tageen si degdeg ah, oo waxaa jira weli fursad fiican oo aad u soo ceshano xal kabashada inta ay tahay ma overwritten by files cusub.
Sidaas, xusuuso wax muhiimka ah: Jooji isticmaalka disk ama ugu yaraan Risaalo gaar ah halkaas oo aad ka badiyay files ah, haddii aad doonaysid in aad dib-u helin. Overwritten ka dhigi doonaa xogta aad si joogto ah baabbi'iyeen.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray, xogta formatted ka Hitachi cajaladaha adag
Bilowga aad, aad u hesho qalab kabashada xogta si ay uga caawiyaan in aad shaqo ka soo kabashada. Waa muhiim in aad doorato barnaamij lagu kalsoonaan karo iyo mid xirfadeed taa oo runtii waxa uu sheegaayo, ama xogta aad badiyay dhaawac doono isticmaalkiisa. Haddii aadan haysan khiyaar ah, halkan yimaado aan is-hoosaysiiya talo: Wondershare Data Recovery ama Wondershare Data Recovery for Mac. Labada of software waa 100% lagu kalsoonaan karo oo aad dib u heli kartaa dhammaan xogta ka Dell drives adag oo ay ku jiraan sawirrada, videos, audio, waraaqaha, iwm .
Next, aynu isku dayi version Windows ee this Hitachi HDD software kabashada xogta wada. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad isticmaali kartaa version Mac of this software kabashada xogta inuu ka soo kabsado xogta ka Hitachi disk adag si la mid ah kuwo ku soo socda.
Kadib markii ay Hitachi software kabashada disk adag ka, waxaad heli kartaa laba hababka soo kabashada raaca Doorashadaada: Wizard (sida default a) iyo Standard Mode.
Labada of qaabab dib u soo kabashada waa ciyaar saaxiibtinimo oo dareen leh, oo ay isla shaqeeyaan sidii midba midka kale, kaliya soo bandhigeen kala duwan. Next, ina keen inay Next iyo Wizard ka qaadan sida tusaale.
Step2. Dooro nooca file aad rabto in aad ka soo kabsado Hitachi cajaladaha adag ka.
Step3. Dooro goobta file soo-celinta sida ay tilmaanta.
Step4. Sahlo baaritaan qoto dheer oo bilow, ama aad ka boodi kartaa haddii aad disk aan la formatted.
Step5. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan files lumay ka Hitachi HDD.
In natiijada scan, dhammaan faylasha recoverable waxaa lagu soo bandhigaa oo si fiican u kala saaraa. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi in ay iyaga oo dhan soo kabsadaan ka mid ah. Faylal ay la previewed karo hadda, JPG, JP2, jpeg, TIFF / TIF, PNG, BMP, GIF, DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF, HTML / HTM, ZIP iyo rar.
FIIRSO: Marka kabsaday files, kuma badbaadin on Risaalo ka mid ah inaad halkaas iyaga ka hor laga badiyay. Dooro xijaab kale ama disk si ay u kaydiso. Haddii aad rabto in aad soo kabsado files sawirka kadib markii danbe, xasuuso inaad badbaadin natiijada scan iyo aad si toos ah u soo kartaa adigoo u soo degida, halkii rescan.
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Sata Hard Drive
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga cajaladaha Toshiba Hard
Top 10 Barnaamijyada Drive Recovery Free Hard
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka burburtay External Hard Drive